Kooriyaan Kaabaa dursaan kabajaa biyyattii Kiim Yoongi-Naam gara Kooriyaa Kibbaatti erguuf - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Kiim Yoongi-naam, garee paarlaamaa Piyoongiyaangi qabatanii kan deeman, sirna baniinsaa Itti-aanaan Pirezedaantii Ameerikaa Maayik Peensi waliin irratti hirmaachuun isaanii waanti beekame hin jiru.
Kooriyaan Kaabaa anga'aa ol-aanaa turtii waggootaa booda wal-diddaa biyyoota lamaanii yeroo Olompika Gannaa kana laaffateen walqabatee gara Kibbaatti erguudhaaf jetti.
Dursaan kabajaa biyyattii, Kiim Yoongi-naam, Jimaata dhufurraa eegalee garee daawwattootaa miseensa 22 of keessaa qabu dursuun gara Kooriyaa Kibbaatti imaluuf jedhu jechuun Ministeerri Yuunifikeeshinii Kibbaa himan.
Sirna baniinsaa irraatti atileetonni Kooriyaa lamaanii alaabaa tokko jalatti hiriiru.
Hirmaannaan Kooriyaan Kaabaa taphoota sanarratti taasiftu ballinaan akka hojii hariiroo dippilomaasii Piyoongiyaangi ta'etti ilaalama.
Kooriyaan Kaabaa yeroo ammaa kana sagantaa nuukilaaraafi misaa'elii waliin walqabateen dhiibbaa addunyaafi qoqqobbiiwan dabalaa jiruutu ishee mudataa jira.
Kooriyaan Kaabaa Wixata garee aartii tokko Taphoota sanaarratti doonii nama fe'uun erguuf karoorfatteetti. Kun ammoo deemsa qoqqobbiin biyyoota lamaan gidduu jiru akka ka'u kan gaafatudha.
Akka Ministeera Yuunifikeeshinii Kibbaatti, Piyoongiyaangi akka yaada dhiyeessitetti gareen erguuf jettu kun 'Mangyongbong 92', doonii nama fe'uun yeroo baayyee Kooriyaa Kaabaafi Raashiyaa gidduu hojjettu akka geejjibaafi bakka turtii garee sanaa taatee tajaajiltu gochuuf.
Bara 2010 irraa kaasee dooniiwwan Kooriyaa Kaabaa akka Kooriyaa Kibbaa hin seenne dhowwamaniiru.
"Olompika milkaa'inaan gaggeessuuf jecha karaa ittiin qoqqobbii hambisnu barbaanna...," jecchuun dubbi-himaan ministeera Kooriyaa Kibbaa Baik Tae-hyun gazexeessitootatti himan.
Kiim Yaangi-naam Kaabatti dursaa paarlaamaa kan ta'aniifi aanga'waa ol-aanaa waggaa afur keessatti Kooriyaa Kibbaa daawwatanidha.
Aanga'waan maqaan isaa hin eermamiin South's presidential Blue House irraa akka BBC'tti himetti kun gama Kooriyaaa Kaabaatiin walitti dhufeenya Kooriyaa Kibbaa waliin qaban foyyeessuuf fedhii akka qabduufi haqaa qabaachuu isahee akka agarsiisu ammanna jedhu.
Obb Kiim garee aanga'woota sadii biroofi hojjetoota deggersaa 18 gaggeessu, akka ministeerri yuunifikeeshiniin jedhutti.
Goodayyaa suuraa Kooriyaan lameen ammallee, wal gaarerfachuutti jiru waan ta'eef naannoo waraana irra bilisa ta'een (Demilitarised Zone (DMZ)) adda ba'aniiru.
Humna nuukilaaraa qabdu agarsiifachuuf jecha Kooriyaan Kaabaa yaalii misaa'ela dhukaasuu walitti aansuun gaggeessiteetti.
Hormaannaan Kooriyaa Kaabaa Olompika Guraandhala 9, 2018 irraa kaasee gaggeefamurratti hirmaachuun tarkanfii yeroo gabaabaa keessatti gara araaraatti deebituudha.
Tarkaanfiin kun gaggeessaan abbaa isaa dhaale, Kiim Joongi-uun ergaa waggaa haarawaa irratti taasiseen walqabatee mariidhaaf fedhii qabaachuu ibsuun Taphoota Olompikaa irratti garee erguus Kooriyaa Kibbaaf yaada dhiyeessee boodadha.
Aata'u malee, karaan araaratti geessu bu'e ba'ii qaba.
''Yaaddoon badiisaa buna addunyaa mudateera''
DR Koongoon bu'aa sagalee filannoo akka tursiiftu gaafatamte
Saawudiitti 'Dubartootni akka garbaatti ilaalamu'